Molotra toy ny lamba rongony ho an'ny makiazy Reed | Famoronana an-tserasera
Mikasika ny makiazy dia nitondra mpanakanto maromaro izahay nampifaly anay tamin'ny fampiasan'izy ireo ny hoditra izy ireo toy ny lamba tonga lafatra mamorona cosplay na akanjo mampatahotra ny saina indrindra amin'ny alin'ny Halloween.
Andrea Reed dia mpanakanto makiazy izay nanana ny heviny tsara ampiasao ny molotrao ho toy ny canvas tsara indrindra hamoronana asa kanto kanto. Mpanakanto makiazy kanadiana iray izay gaga anay amin'ny nuances voafantina ao amin'ireto sary ireto izay mitondra antsika mankany amin'ireo lehibe na endrika ravina.
Iray volana lasa izay dia nanana mpanakanto makiazy iray hafa izahay, Andrea de la Ossa, izay nahatonga anay hanakaiky kokoa ny fiovany ho lasa biby goavambe amin'ny karazany rehetra mba hohanin'ny antsantsa aza amin'ny fampisehoana somary mahaliana sy manaitra.
Ny sary an-tsaina ao amin'ny makiazy Reed no mitondra molotra loko isan-karazany amin'ny loko isan-karazany tantely tantely, tantely iray voafandrika eo an-joro na lamina mahazatra lamban-databia ao an-dakozia. Mampiseho amintsika ny zavakantony amin'ny karazana endrika sy endriny i Reed mba hanerena antsika hieritreritra fa eo alohan'ny molotra vitsivitsy isika, eny, tena tsara tarehy sy marevaka, tonga lafatra handravahana azy ireo amin'ny teknikan'ity artista kanadiana ity.
Noho io asa eo amin'ny molotra io dia afaka nahatanteraka i Reed mpanaraka maherin'ny 100.000 ao amin'ny Instagram. Makiazy iray izay akaikin'ny an'ny maro hafa toa an'i Laura Jenkinson na Tal Peleg izay mampiasa tapany amin'ny tarehiny hitondrana antsika amin'ireo mpilalao Disney na saka izay misarika ny mason'ilay mason'ilay mpanakanto.
Ianao dia manana Reed's Instagram for araho tsara ny asany ary mitadiava molotra manaitaitra vaovao miaraka amin'ny karazana lamba, loko, sary ary lamina, ary koa tolo-kevitra kanto hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mpanakanto makiazy mamadika ny molony ho zavakanto kanto
Endritsoratra ho an'ny kalitaon'ny matihanina 7.000+ maimaimpoana